बालविवाहबाट बच्ने उपाय |
प्रकाशित मिति :2015-10-30 13:49:46
बुटवल, कात्तिक १३ । गरिबीका कारण छोरीलाई बीचमै पढाई छुटाउने र विवाह गरिदिने समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ? यसका धेरै उपाय हुन सक्छन् । रुपन्देहीका केही किशोरीहरूले भने आफैले आय आर्जनका काम गरेर पढाइलाई निरन्तरता दिएका छन् । केहीले पढ्न जान नपाए पनि आयआर्जनबाट आर्थिकस्तर सुधार्न र बालविवाहबाट बच्ने उपाय थालेका छन् । त्यस्ता बालबालिका जिल्लाका फरेना, वसन्तपुर, पोखरभिण्डी, पजरकट्टी, बोधबार लगायतका १३ गाविसमा झण्डै २ सय जना छन् । त्यसमध्येकी एक हुन् सुनिता हरिजन ।
फरेनाकी १६ वर्षीय सुनिता हरिजन धेरै पढ्न र २० वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न चाहान्थिन् । तर घरपरिवारले ११ वर्ष लाग्दैबाट उनको विहे गरिदिने तयारी गर्न थाले । यसबाट उनी चिन्तित भइन् । आफ्नो चिन्ता साथीहरूसित बाँडिन । यस्तैमा गाउँमा किशोरीहरू समेटेर संवाद केन्द्र खुल्यो ।
संवाद केन्द्रमा विपन्न, पढाइबाट छुटाइएका, पढ्ने अवसर नपाएका लगायतका किशोरीहरू राख्ने वडास्तरीय छलफल भयो । सुनिता पनि सो गणेश किशोरी संवाद केन्द्रकी सदस्य बनिन् । यसमा उनीजस्तै समस्या भएका ३० जना किशोरी सदस्य थिए । उनीहरू दैनिक भेट हुन थाले । साथै शिक्षकले उनीहरूलाई चुनौतिसँग जुध्न सिकाउन थाले । बालविवाह उनीहरूको मुख्य चुनौति थियो । दिनमा २ घण्टा समस्या बनेको बालविवाह रोक्ने समाधान गर्ने भन्नेबारे साथीहरू बीच छलफल हुनथाल्यो ।
धेरैले सिलाइ सिकेर आत्मनिर्भर हुनसके बालविवाहबाट बच्ने उपाय लगाए । सिलाई तालिम त लिने तर कसरी ? किशोरीहरूले जुक्ति निकाले गाविसमा जाने र सहयोग माग्ने । गाविस एक्लैले सो तालिम दिन नसक्ने बतायो । यसपछि उनीहरूले संवाद केन्द्र गठन गर्न सहयोग गरेको एबीसी नेपालसँगै कुरा राखे । किशोरीहरूको चाहना र आवश्यकता अनुसार स्ट्रोमा फाउन्डेसनको सहयोगमा निशुल्क सिलाइ कटाइ तालिमको व्यवस्था भयो ।
सस्थाले किशोरीको मागको आधारमा ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म मसिन किन्न सहयोग गर्यो । सुनिता अहिले आफ्नो घरपरिवार मात्रै होइन छिमेकीका लुगा समेत सिलाएर कमाउन थालेकी छिन् । ‘कमाउन थालेपछि घरमा विवाहको कुरा हुन पनि छोडेको छ ।’ सुनिता भन्छिन् ‘सिलाई सिकेकै कारण बालविवाहबाट बच्न सकें ।’ सुनिता जस्तैगाउँका किरण, सोनमती लगाएका एक दर्जन किशोरीले अहिले सिलाएर आयआर्जन गर्न थालेका छन् ।
कक्षा ५ पछि पढ्न नपाएकी असुरैना गाविसकी १५ वर्षीय रुसा केबटको पनि घरपरिवारले विहे गरिदिने पक्का गरेका थिए । संवाद केन्द्र र किशोरी समूह मार्फत सिलाई सिकेकी उनले अनुदानमा सिलाई मसिन पनि पाइन् । एक रुपैयाँ खर्च नगरी उनले अहिले सिलाईकटाइबाट आयआर्जन गरेकी छिन् । सिलाइबाट कमाउन थालेपछि उनको विवाहको कुरा हराएको छ । ‘छोरीले कमाएर बाबुआमालाई गर्दैनन् भन्ने सोचले छोरीलाई नपढाउने र सानैमा विहे गरिदिने रहेछन् । ’ रुसाले सुनाइन् ‘कमाउन थालेपछि विवाहको कुरा हराएको छ ।’ छोरीको सानैमा विहे गरे पुण्य कमाइने धार्मिक विश्वाश र पालनपोषण तथा शिक्षामा खर्च गर्नु नपर्ने व्यवहारिक कारणले बालविवाह हुने गरेको छ ।
जेसुकै कारणले बालविवाह भएपनि त्यसको मारमा बालिका परेका छन् । बालविवाह रोक्न बालबालिकाले चलाएको अभियानमा फरेना गाविसले समेत हातेमालो गरेको छ । बालबालिकाको सुझावमा गाविसले उमेर नपुगी विवाह गर्ने जोडीको विवाह दर्ता, र नवजातको जन्मदर्ता रोकेको छ । नेपालको कानुनले अभिभावकको स्वीकृतिमा १८ र आफ्नो खुसीमा २० वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न स्वीकृति दिएको छ । स्वास्थ्यको दृष्टिमा भने विहेवारी २० वर्ष पारि भन्दै देशव्यापि कार्यक्रम चलाएको छ ।
कानुन र अभियान जे जस्ता भएपनि रुपन्देहीका ५० प्रतिशत छोरीहरूको विवाह उमेर नपुग्दै हुने गरेको छ । यसलाई रोक्न बालबालिकाले थालेको अभियान प्रभावकारी हुनसक्ने जिल्ला बाल अधिकृत राज्यलक्ष्मी गुप्ता बताउँछिन् । बालविवाह र हिंसाबाट छोरीहरूलाई बचाउन किशोरी अभियान थालेका एबीसीका कार्यक्रम संयोजक मनोज लामिछाने बालविवाहबाट बचाउन अभिभावकलाई शिक्षा र चेतना सँगसँगै दिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन् ‘अभिभावकलाई सम्झाउन र परिवर्तन गर्न नसकिए बालबालिकालाई प्रयोग गरेर भएपनि त्यो काम गर्नुपर्छ । ’
लुगा सिलाउदै रुपन्देहीको असुरैनाकी रुसा केवट